पेट बाउडिन्छ ? आन्द्राको समस्या हुनसक्छ ! - VOICE OF NEPAL
२० माघ २०७६, सोमबार ०२:००
पेटमा ग्यास भरिने, कब्जियत हुने, पखला लाग्ने जस्ता समस्यालाई हामी सामान्य ठान्छौ । कतिपय अवस्थामा यी सामान्य पनि हुन् । खानपान र दिनचर्या नमिल्दा यस्ता समस्या उत्पनन हुनसक्छ । तर, सधै यहि अवस्था रहिरहेमा ?
सामान्यतः इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमलाई (आईबीएस) ठूलो आन्द्रा सम्बन्धी एउटा समस्या हो । यो समस्या भएमा ठूलो आन्द्राले राम्ररी काम गर्न सक्दैन । जसका कारण पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, बेचैनी हुने, पेटमा ग्यास भरिने तथा पखाला लाग्ने तथा कब्जियत हुन लगायतका समस्या उत्पन्न हुने गर्छ ।
आइबीएसको निश्चित कारण अझै थाहा हुन सकेको छैन । यद्यपि, आन्द्राको मांसपेशीले राम्ररी काम नगर्दा यस्तो समस्या निम्तने गर्छ । आन्द्राको असाधारण खुम्चने प्रक्रियाकै कारण आन्द्राले राम्ररी काम गर्न सक्दैन र पेट दुख्न थाल्छ ।
कयौ मानिसलाई तनावका कारण यस्तो समस्या हुने गर्छ । तनाव भएमा एड्रिनल ग्रन्थीबाट एड्रिनल तथा कार्टिसाल नामको हर्मोनको श्राव हुन्छ । तनावकै कारण पाचन यन्त्रमा जलन हुनथाल्छ जसले गर्दा पाचन नलीमा सुजन हुन्छ, जसका कारण शरीरले पोषण तत्व पाउदैन ।
आइबीएसको समस्या पुरुषकेा तुलनामा महिलाहरुलाई दोब्बर हुने गर्छ । महिलाहरुमा हर्मोनको गडबडी पनि आईबीएस् (इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम)को कारण हुनसक्छ । कयौ महिलामा महिनावारीको समयम यो समस्या धेरै हुने गर्छ ।